Isixhobo sokuhlamba umzimba Abavelisi kunye nabaXhasi | China Isixhobo sokuhlamba umzimba seTshayina
Inja Shampoo yokuzilungisa iBrashi
1.Le Shampoo yenja yokuCoca iBrashi kulula kakhulu ukuyibamba kwaye ilungele abanini abanika ibhafu yezilwanyana zasekhaya ngokwabo.
I-2.Le shampoo yokulungisa inja ineebristles ezithambileyo, ayizukulimaza uboya kunye nolusu kwaye ungasusa iinwele zesilwanyana sakho ngokulula.
3.Ngokugcinwa kwesangqa esincinci, awuzukufuneka ukolule ishampu kunye nesepha ngelixa uhlamba isilwanyana sakho. Le brashi ingasetyenziselwa ukuhlamba kunye nokuthambisa izinja.
Ukurubha nje isilwanyana sakho kancinci, le shampoo yokulungisa inja inokwenza amagwebu atyebileyo ukuze inja ihlambuluke kunenye ibrashi eqhelekileyo.
Ukuhlamba i-Brush kweenja
1. Le bhulashi yokuhlambela inja inzima isusa ngokulula iinwele kunye ne-lint ngaphandle kokubamba i-tangles kwaye ibangele ukungathandeki kwinja yakho. Izinto eziguqukayo zerabha ezisebenza njengemagnethi yokungcola, uthuli kunye neenwele ezikhululekileyo.
2. Le bhulashi yokuhlamba inja inezinyo elirhangqiweyo, Ayilimazi ulusu lwenja.
3. I-Bath Bath Shower Brush ingasetyenziselwa ukuphulula izilwanyana zakho, kwaye izilwanyana ziya kuqala ukukhululeka phantsi kwesindululo sebrashi.
4. Icala lokubambelela elingatyibiliki, ungaqinisa ukubamba xa uphulula inja yakho, nokuba sele uhlamba.
Ukuhlamba izinja Ukuhlamba isitshizi
Le nto yokuhlambela inja yokuhlambela inkunkuma idibanisa ibrashi yokuhlambela kunye nesitshizi samanzi.Akuyi kuthatha ishawa yezilwanyana, kodwa kunye nokuthambisa.Ngokuthanda inja yakho amava e-spa encinci.
2.Professional inja yokuhlamba isitshizi sokutshiza, imilo eyahlukileyo eyahlukileyo eyilelwe ukuhlamba izinja zabo bonke ubukhulu kunye neentlobo.
Iadaptha zombane ezisuswayo ezinombini, faka kwaye ususe ngokulula ngaphakathi okanye ngaphandle.
4.Isitshizi sokuhlamba inja siwanciphisa kakhulu amanzi kunye nokusetyenziswa kweeshampu xa kuthelekiswa neendlela zokuhlamba zesintu.
Ukuhlanjwa kweenwele zasekhaya Ukuhlamba kunye neBrashi yokuPhulula
I-1.Pet Hair Hair Grooming Bathing And Massage Brush inokusetyenziswa zombini emanzi okanye eyomileyo.Ingasetyenziselwa ibrashi yokuhlamba ukucoca iinwele zasekhaya, kodwa njengesixhobo sokuthambisa ngeenjongo ezimbini.
2.Made izinto TPE ekumgangatho ophezulu, uthambile, luthambe eliphezulu kwaye non-toxic.With uyilo nolwazelelelo, kulula ukubamba kwaye kulula ukuyisebenzisa.
3.Amazinyo amade athambileyo anokucoca ngokunzulu kwaye akhathalele ulusu, inokususa iinwele kunye nobumdaka ngobunono, yonyusa ukujikeleza kwegazi kwaye ishiye idyasi yesilwanyana sakho ithambile kwaye iyakhazimla.